नेपालमा फेरी थ`प एक जनामा कोरोना पु`ष्टि !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/नेपालमा फेरी थ`प एक जनामा कोरोना पु`ष्टि !!
काठमाडौँ । नेपालमा थप १ जना कोरोनाका संक्र`मित भेटिएका छन् । कोशी अस्पताल विराट`नगरचले थप १ जना नयाँ संक्र`मित भेतिकेको पु`ष्टी गरेको हो । डाक्टर समिरकुमार अधि`कारीले यो कुराको पुष्टी गरेका हुन् मन्त्रा`लयले बिज्ञप्ति निकाल्दै भएंको छ हालको अध्या`वधिक विवरण अनुसार कोभिड – १९ का पुष्टी भएकाहरुको जम्मा सं`ख्या ११० पुगेको छ ।
ति मध्ये ३१ जना उपचार पछि घर फर्कि-सकेका छन् ! सबै बिरामीहरु सामान्य अवास्थामा रहेको स्वा`स्थ्य मन्त्रा`लयले जनायको छ ! नेपालको तराई क्षेत्र बढी प्रभा`वित भएको छ , सरकार द्वा`रा सिमा छेत्रमा क`डाई गर्नुपर्ने देखिएको छ !
नेपालमा थप १ जना कोरोनाका संक्र`मित भेटिएका छन् । कोशी अस्पताल विराट`नगरचले थप १ जना नयाँ संक्र`मित भेतिकेको पु`ष्टी गरेको हो । डाक्टर समिरकुमार अधि`कारीले यो कुराको पुष्टी गरेका हुन् मन्त्रा`लयले बिज्ञप्ति निकाल्दै भएंको छ हालको अध्या`वधिक विवरण अनुसार कोभिड – १९ का पुष्टी भएकाहरुको जम्मा सं`ख्या ११० पुगेको छ ।